Xulka Awdal Oo 2-0 Ku Karbaashay Sanaag + Bandhig Ciyaareedkii Nadiifta Ahaa Ee Ciyaartoyga Labada Gobol
HomeWararka MaantaXulka Awdal Oo 2-0 Ku Karbaashay Sanaag + Bandhig Ciyaareedkii Nadiifta Ahaa Ee Ciyaartoyga Labada Gobol
28/10/2016 Abdiwahab Ahmed
Xulka Gobolka Awdal oo 2-0 ku jiidhay Sanaag
Xulka kubadda Cagta gobolka Awdal ayaa guul qurux badan ka gaadhay ciyaartii koowaad ee tartanka ciyaaraha gobollada Somaliland, taas oo ay 2-0 kaga badiyeen gobolka Sanaag.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka quruxda badan ee Hargeysa Stadium ayey daawashadeeda ka soo qayb-galeen dad weyne tiro badan oo buuxiyey qaybo ka mid ah garoonka, kuwaas oo sacab iyo sawaxan ku qurxiyey ciyaarta.
Intii aanay ciyaartu bilaabmin ayey taageereyaashu si qurux badan u camireen garoonka, iyagoo u fadhiistay laba qaybood oo kala taageeraysay labada xul gobol. Waxa kale oo iyaguna garoonka wakhti horeba yimid, wasiirrada Caafimaadka, Hawlaha Guud, Wasiirka ciyaaraha, agaasimeyaal, iyo hawl-wadeennada kala duwan ee xidhiidhada kubbadda cagta iyo ciyaaraha fudud.
Markii garoonka la soo galay ayey taageereyaashu sacab ku qaabileen ciyaartoygooda, iyagoo ku dhowaaqaya magacyada ciyaartoyga qaarkood, waxaanay taasi ka dhigtay ciyaarta mid jewi wanaagsan ku socota illaa dhamaadkii.
Qaybta horeba, waxay labada xul gobol bilaabeen weerar iyo weerar celis, khadka dhexe oo aad loogu loollamay kaddibna waxa ay labada macallin ku khasbanaadeen in qaybta horeba beddelaan min hal ciyaartoy, kuwaas oo sababo farsamo darteed garoonka uga baxay.
Qaybta hore oo aan dhamaanin ayuu jewiga garoonku isbeddelay markii xulka gobolka Awdal ay shabaqa Sanaag dhex dhigeen goolka koowaad oo uu dhaliyey ciyaartoyga lambarka 9aad u xidhan Awdal oo lagu magacaabo Bahdoon (Baloteli). Inkasta oo dedaal badan ay muujiyeen ciyaartoyga labada gol, umay suurotgelin in ay goolal kala dhaliyaan, waxaanay ku kala nasteen 1-0 ay hoggaanka ku hayaan ciyaartoyga Awdal.
Intii lagu jiray wakhtiga nasashada, wariyeyaasha shabakadda ciyaaraha cadalool oo booqday qolalka nasashada, ayaa arkay dhiirigelin iyo waanooyin ay ciyaartoyga siinayaan tababareyaasha iyo isu-duweyaasha kala hoggaaminaya.
Talooyin kaddib, waxay ciyaartoygu dib ugu noqdeen garoonka oo garoonka, waxaana halkii ay ka bilaabeen loollanka, adeegsiga farsamooyinka lugta, madaxa iyo shafka, oo ay u dheertahay in quwadaha rabbaaniga ee qof kasta uu Allah siiyey, waxaana taas ku awood roonaaday xulka gobolka Awdal oo kubbad haysashada, isku dhiibka, difaaca iyo dhaqaajinta xagga weerarkaba kaga wanaagsanaa Sanaag.
Xulka gobolka Awdal ayaa mar kale u damaashaaday gool, laakiin garsooraha ayaa sheegay in uu ku jiray offside, balse daqiiqado kaddib ayey heleen gool labaad oo kiciyey taageereyaasha, waxaana si qurux badan u dhaliyey mar kale Bahdoon (Baloteli) oo u xidhnaa lambarka 9.
Inkasta oo ay dedaal badan sameeyeen ciyaartoyga Sanaag, umay suurtogelin in ay goolal dhashadaan, waxaana 90-kii daqiiqo ee ciyaartu ku dhamaaday 2-0 ay guushu ku raacday wiilasha gobolka Awdal.
Ibra Aiming For revenge: “Ibra Wuxuu Rabaa In Uu Ka Aarsado Guardiola”
22/02/2015 Abdiwahab Ahmed
Messi iyo Suarez Oo Ku Galgashay Roma, Wacdarihii Camp Nou iyo Hal-xidhaalihii Xalay